Announcement (05 August 2021) – Bahan International Science Academy
August 6, 2021 webdev
As usual, I will start by thanking you for your constant support and commitment to your children’s education during our last Academic year.
I would like to introduce our new Principal Mr. Nazar Baltabyev from Kyrgyzstan who will take charge of BISA school starting from this new Academic year. A warm welcome and best wishes forasuccessful andaproductive school year. In these difficult days of Covid-19 pandemic, we are especially grateful to the great majority of parents who have foundaway to register your child for the new academic year.
Due to the increasing number of Covid cases in Myanmar, we understand that it has beenavery difficult time for everyone. The present pandemic situation and lockdown during the month of July have made the day-to-day activities difficult for all in the face of unprecedented challenges. As such the BISA School Leadership Team have decided to re-open school for the coming Academic Year 2021-22 starting from 30 August. This delay of two weeks will be covered up by extending the school days until June 17, 2022.
The leadership of the (BFI) BISA school is determined to do everything possible to continue to fulfill our mission to provide an excellent service for our parents and students.
It is sad that we can’t welcome students for physical learning this semester due to the present situation, but we are confident that together we can makeagreat success in virtual learning with your support and cooperation. Before we reopen school, we will send your children the Class Code for online learning.
We are excited to welcome our students for the new Academic year and we look forward to the coming year with excitement and enthusiasm. We wish you and your family an enjoyable and safe time for the rest of the holidays.
Please call Student Affairs before you go to our BISA school office at 09456481950, 09955191676.
ပထမဦးစှာ ပွီးခဲ့တဲ့ စာသငျနှဈအတှငျး မိဘမြားအ​နနေဲ့ မိမိတို့က​လေးမြားရဲ့ ပညာသငျကွားခွငျးအ​ပျေါ ​စဥျဆကျမပွတျ ကူညီပံ့ပိုးမှု မြားအတှကျ ကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
​ရှနှေ့ဈစာသငျနှဈအသဈမှစတငျ၍ BISA ​ကြောငျးကို တာဝနျယူသှားမညျ့ ကြှနျမတို့ရဲ့ ​ကြောငျးအုပျဆရာအသဈနဲ့လညျး မိတျဆကျ​ပေးခငျြပါတယျ၊ သူက​တော့ Mr. Nazar Baltabyev ဖွဈပွီး Kyrgyzstan နိုငျငံမှဖွဈပါသညျ။ ​​​​အောငျမွငျ​သောစာသငျနှဈ ဖွဈလာ​စရေနျအတှကျ ​အ​ကောငျးမှနျဆုံး ​နှေး​ထှေးစှာဖွငျ့ ကွိုဆိုလိုကျပါသညျ။
ယခုလို ခကျခဲလှတဲ့ ကိုဗဈ ၁၉ ကပျ​ရောဂါ အခြိနျမှာ လာမယျ့စာသငျနှဈအသဈအတှကျ ​ကြောငျးအပျနှံပွီးတဲ့ မိဘအမြားစုကိုလညျး အထူးပငျ ​​ကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ကိုဗဈ ​ရောဂါဖွဈပှားမှုနှုနျးမြား အလှနျမွငျ့တကျလာတဲ့အတှကျ, ဒီအခြိနျဟာ လူတိုငျးအတှကျ ခကျခဲ​နမေယျဆိုတာ ကြှနျ​မ တို့နားလညျပါသညျ။ယခုလကျရှိကပျ​ရောဂါ အ​ခွအေ​နနေဲ့ ဂြူလိုငျ လအတှငျး Lockdown ခထြားမှုတို့​ကွောငျ့ ​ကြှနျမတို့အားလုံးနစေ့ဥျလှုပျရှားသှားလာမှု့​ အခကျအခဲ​တှအေတှကျ မကွုံဖူးတဲ့စိနျ​​ချေါမှု့​တှနေဲ့ရငျဆိုငျ​နကွေရပါတယျ။ အဲ့အတှကျ ကြှနျမတို့ BFI ​​ကြောငျးအုပျခြုပျ​ရေးအဖှဲ့မှ လာမယျ့ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ စာသငျနှဈ ကို သွဂုတျလ ၃၀ ရကျတှငျ ကြောငျးပွနျလညျဖှငျ့လှဈရနျဆုံးဖွတျခကျြခခြဲ့ပါသညျ။ ယခုလို အခြိနျ ၂ ပတျ​နောကျကမြှ ဖှငျ့ရသညျ့အတှကျ ​ကြောငျးစာသငျရကျမြားကို ဇှနျ လ ၁၇,၂၀၂၂ အထိတိုးမွှငျ့​ပေးထားပါသညျ။
BFI ​ကြောငျးအုပျခြုပျ​ရေးအဖှဲ့သညျ မိဘမြားနှငျ့​ကြောငျးသားမြားအတှကျအ​ကောငျးဆုံးဝနျ​​ဆောငျမှု့​ပေးရနျ နှငျ့ ကြှနျမတို့​ကြောငျးရဲ့ ရညျမှနျးခကျြကိုဖွညျ့ဆညျးရနျ အတကျနိုငျဆုံးအရာအားလုံးကို လုပျ​ဆောငျသှားရနျ ဆုံးဖွတျထားပါသညျ။
ယခုလကျရှိအ​ခွအေ​နအေရ လာမညျ့ နှဈဝကျ တှငျ ​ကြောငျးသားမြားကို Physical learning (​ကြောငျးတှငျးသငျကွားမှု) ​ကြောငျးတကျ​ရောကျနိုငျရနျ ​ကြောငျးမှ ကွိုဆိုနိုငျခွငျးမရှိ​​သေးသညျ့အတှကျလညျး ဝမျးနညျးမိပါသညျ။သို့​ပမေယျ့ မိဘမြားရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှု့ ၊ပူး​ပေါငျး​ဆောငျရှကျမှု့ မြားနဲ့အတူ ဒီ online စာသငျကွားမှု့ ကို​အောငျမွငျ​အောငျလုပျနိုငျမယျလို့ ကြှနျမတို့ ယုံကွညျပါသညျ။​ကြောငျးဖှငျ့ရကျ မတိုငျမှီ က​လေးမြားရဲ့ Online စာသငျမှု့အတှကျ Class Code မြားကိုပို့​​ဆောငျ​ပေးပါ့မညျ။
ကြှနျမတို့ သညျလာမယျ့စာသငျနှဈအသဈအတှကျ ​ကြောငျးသားမြားကို စိတျလှုပျရှားစှာ ကွိုဆို မှု့နှငျ့အတူလာမညျ့စာသငျနှဈ အတှကျ အ​ကောငျးဆုံးဖွဈရနျ ​မြှျောလငျ့မိပါသညျ။ကနျြရှိ​နသေညျ့အားလပျရကျမြားအတှကျ သငျနှငျ့သငျ့မိသားစု တို့အတှကျ ​​ပြျောရှငျစရာ အခြိနျမြားကို ပိုငျဆိုငျနိုငျပါ​စလေို့ဆု​တောငျး​ပေးလိုကျပါသညျ။
​​ကြေးဇူးပွု၍ BISA ​ကြောငျးရုံးခနျးသို့ မလာမှီ ကွိုတငျ၍ ​ကြောငျးသား​ရေးရာ ဖုနျးမြားဖွဈတဲ့ 09-456481950, 09-955191676 သို့ ဖုနျးဆကျ​ပေးကွပါရနျ။
ပထမဦးစွာ ပြီးခဲ့တဲ့ စာသင်နှစ်အတွင်း မိဘများအ​နေနဲ့ မိမိတို့က​လေးများရဲ့ ပညာသင်ကြားခြင်းအ​ပေါ် ​စဉ်ဆက်မပြတ် ကူညီပံ့ပိုးမှု များအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
​ရှေ့နှစ်စာသင်နှစ်အသစ်မှစတင်၍ BISA ​ကျောင်းကို တာဝန်ယူသွားမည့် ကျွန်မတို့ရဲ့ ​ကျောင်းအုပ်ဆရာအသစ်နဲ့လည်း မိတ်ဆက်​ပေးချင်ပါတယ်၊ သူက​တော့ Mr. Nazar Baltabyev ဖြစ်ပြီး Kyrgyzstan နိုင်ငံမှဖြစ်ပါသည်။ ​​​​အောင်မြင်​သောစာသင်နှစ် ဖြစ်လာ​စေရန်အတွက် ​အ​ကောင်းမွန်ဆုံး ​နွေး​ထွေးစွာဖြင့် ကြိုဆိုလိုက်ပါသည်။
ယခုလို ခက်ခဲလှတဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်​ရောဂါ အချိန်မှာ လာမယ့်စာသင်နှစ်အသစ်အတွက် ​ကျောင်းအပ်နှံပြီးတဲ့ မိဘအများစုကိုလည်း အထူးပင် ​​ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် ​ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများ အလွန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်, ဒီအချိန်ဟာ လူတိုင်းအတွက် ခက်ခဲ​နေမယ်ဆိုတာ ကျွန်​မ တို့နားလည်ပါသည်။ယခုလက်ရှိကပ်​ရောဂါ အ​ခြေအ​နေနဲ့ ဂျူလိုင် လအတွင်း Lockdown ချထားမှုတို့​ကြောင့် ​ကျွန်မတို့အားလုံးနေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာမှု့​ အခက်အခဲ​တွေအတွက် မကြုံဖူးတဲ့စိန်​​ခေါ်မှု့​တွေနဲ့ရင်ဆိုင်​နေကြရပါတယ်။ အဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ BFI ​​ကျောင်းအုပ်ချုပ်​ရေးအဖွဲ့မှ လာမယ့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ စာသင်နှစ် ကို သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်တွင် ကျောင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ ယခုလို အချိန် ၂ ပတ်​နောက်ကျမှ ဖွင့်ရသည့်အတွက် ​ကျောင်းစာသင်ရက်များကို ဇွန် လ ၁၇,၂၀၂၂ အထိတိုးမြှင့်​ပေးထားပါသည်။
BFI ​ကျောင်းအုပ်ချုပ်​ရေးအဖွဲ့သည် မိဘများနှင့်​ကျောင်းသားများအတွက်အ​ကောင်းဆုံးဝန်​​ဆောင်မှု့​ပေးရန် နှင့် ကျွန်မတို့​ကျောင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် အတက်နိုင်ဆုံးအရာအားလုံးကို လုပ်​ဆောင်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။
ယခုလက်ရှိအ​ခြေအ​နေအရ လာမည့် နှစ်ဝက် တွင် ​ကျောင်းသားများကို Physical learning (​ကျောင်းတွင်းသင်ကြားမှု) ​ကျောင်းတက်​ရောက်နိုင်ရန် ​ကျောင်းမှ ကြိုဆိုနိုင်ခြင်းမရှိ​​သေးသည့်အတွက်လည်း ဝမ်းနည်းမိပါသည်။သို့​ပေမယ့် မိဘများရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှု့ ၊ပူး​ပေါင်း​ဆောင်ရွက်မှု့ များနဲ့အတူ ဒီ online စာသင်ကြားမှု့ ကို​အောင်မြင်​အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်မတို့ ယုံကြည်ပါသည်။​ကျောင်းဖွင့်ရက် မတိုင်မှီ က​လေးများရဲ့ Online စာသင်မှု့အတွက် Class Code များကိုပို့​​ဆောင်​ပေးပါ့မည်။
ကျွန်မတို့ သည်လာမယ့်စာသင်နှစ်အသစ်အတွက် ​ကျောင်းသားများကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ကြိုဆို မှု့နှင့်အတူလာမည့်စာသင်နှစ် အတွက် အ​ကောင်းဆုံးဖြစ်ရန် ​မျှော်လင့်မိပါသည်။ကျန်ရှိ​နေသည့်အားလပ်ရက်များအတွက် သင်နှင့်သင့်မိသားစု တို့အတွက် ​​ပျော်ရွှင်စရာ အချိန်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါ​စေလို့ဆု​တောင်း​ပေးလိုက်ပါသည်။
​​ကျေးဇူးပြု၍ BISA ​ကျောင်းရုံးခန်းသို့ မလာမှီ ကြိုတင်၍ ​ကျောင်းသား​ရေးရာ ဖုန်းများဖြစ်တဲ့ 09-456481950, 09-955191676 သို့ ဖုန်းဆက်​ပေးကြပါရန်။
By BISA Editor / No Comments
Bahan International Science Academy will be closed effective on 18th March, 2020 to 30th April 2020